Yes လား Yeah လား
နိုင်ငံခြားထွက်လာကြတဲ့ မြန်မာ အများစု ကြုံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ မကြုံသေးသူများနဲ့ နောက်ထပ် ထွက်လာကြမဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် သတိ ထားဖွယ် အချက်လေး တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော်တို့ အမိမြေမှာ အင်္ဂလိပ်စာတွေ သင်ခဲ့ကြတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဆိုရင် Yes။ မဟုတ်ဘူး ဆိုရင် No။ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ကြတော့ အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အခြား နိုင်ငံသားတွေ မှတ်ချက်ချတာလေး ကြုံဖူးတာ ပြောပြချင်တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ စကားတွေ ပြောကြတယ်။ မြန်မာလို ပြောတဲ့ခါ ဟုတ်ကဲ့။ ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ အင်း ။ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးလေးတွေ ရှိတယ်။ အမိမြေကို ခွာပြီး သူများနိုင်ငံ လာကြတဲ့ခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ သင်ကြားခဲ့ရသလိုပဲ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆိုရင် Yes မဟုတ်ဘူးဆိုရင် No ပေါ့။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုဆွေးနွေး ပြောဆိုကြတဲ့ခါ တစ်ခါတစ်ခါ တစ်ဖက်သား ပြောတဲ့ စကားကို Acknowledge လုပ်တဲ့ အခါလေးတွေ ရှိလာတယ်။ တကယ်က မြန်မာလို ပြန်ရင် ဟုတ် လို့ ပြောချင်တာ။ ပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဟုတ်ပါတယ်လို့ လက်ခံတာ မဟုတ်ဘူး။ ပြောတာကို နားလည်ပါတယ်။ သဘောပေါက်ပါတယ် လို့ ပြန်ပြောချင်တာ။
အဲဒီခါ ကျွန်တော်တို့ သင်ခဲ့တဲ့ အထဲမှာ Yeah ဆိုတာ မပါခဲ့ဘူး။ (မောင်လူအေးတို့ သင်ခဲ့ကြတဲ့ထဲ မပါဘူး ပြောပါတယ်။) ဆိုတော့ ပြောသမျှ စကားကို Yes Yes Yes ချည်းပဲ လုပ်တဲ့ခါ တစ်ခါ တစ်ခါ တော်တော် ဒုက္ခ ရောက်ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ပြောဆိုတဲ့ အစည်းအဝေးလိုမျိုး ကိစ္စရပ်မျိုးတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ Yes ချည်းပဲ လုပ်တတ်တဲ့ခါ။ တချို့သော ကိစ္စရပ်များက ဟုတ် လောက်ပဲ ပြောချင်တာ။ အလွယ်ပြောရရင် မြန်မာလို အင်း ပေါ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။
မင်းပြောတာ လက်ခံပါတယ်လို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းပြောနေတာ ငါ သဘောပေါက်တယ်လောက်ပဲ ပြောချင်တာ။ အဲဒီခါ ကျွန်တော်တို့ ပါးစပ်က Yeah ဆိုတာ ထွက်မလာပါဘူး။ မထွက်ဆို သင်ခဲ့ရတာ မဟုတ်တော့ မထွက်ဘူးပေါ့။
ဆိုတော့ ရင်းနှီးတဲ့ မန်နေဂျာ တစ်ယောက်က ပြောပြဖူးတာပါ။ ခုနေ စင်္ကာပူလုပ်ငန်းခွင်မှာ မြန်မာ အများစုဟာIntermediate Level Management Posting တွေမှာ နေရာ ယူထားကြတာ တဖြေးဖြေး များပြားလာနေတယ်။ မင်းတို့ မြန်မာတွေက ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး။ ဘာပဲ ပြောပြော Yes ချည်းပဲ ပြောတတ်တယ်။ အဲဒီခါ တစ်ဖက်က ကုမ္ပဏီက ကိုယ့်ကို ဆာဗိုး (Sabotage ကို အလွယ်ပြောတဲ့ စလုံး အသုံးပါ) လုပ်ချင်တဲ့ခါ ငါတို့ လွှတ်လိုက်တဲ့ မြန်မီးစ် အင်ဂျင်နီယာကို အသံ အော်ကျယ်အော်ကျယ်နဲ့ ပြောတော့ ငါတို့ အင်ဂျင်နီယာက အကုန် Yes လုပ်လာတာနဲ့ ခံရတာများတယ်။ အဲဒီတော့ Yes သိပ်မပြောနဲ့ကွာတဲ့။ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြန်စဉ်းစားရတယ်။ Acknowledge လောက်လုပ်ချင်တဲ့ခါ အင်း လောက်ပဲ ပြောချင်တဲ့ခါ Yes သိပ်မပြောဖြစ်ဖို့။ Yes အစား Yeah သုံးဖို့ ကြိုးစားရ ပါတော့တယ်။
တကယ်တမ်းမှာ Yeah ဟာ Yes လောက် Dead Sure အာမခံတာ မဟုတ်ဘဲ အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ပြောတာ နားလည်တယ်။ လက်ခံ စဉ်းစားမယ်။ တစ်ဖက်သား ပြောစကားကို ဆုံးတဲ့အထိ နားထောင်ပြီး ပြီးတော့မှ သူတင်ပြတဲ့ အချက်အလက်ဟာ မှန်ကန်တယ် မမှန်ကန်ဘူး။ ပြန်လည် ထောက်ပြ ရှင်းလင်းနိုင်တဲ့ အသုံးအနှုံးဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဟုတ်ကဲ့လည်း Yes ၊ ဟုတ်လည်း Yes ၊ အင်းလည်း Yes နဲ့ တစ် Yes တည်း Yes နေရာကနေ Yeah လေးတွေ ပြောင်းသုံးဖို့ ကြိုးစားရင်း...
Filed Under : Language, Sharing
မန်နေဂျာတစ်ယောက်ကတော့ တတ်နိုင်သမျှ မ Yeah ဖို့ အကြံပေးဖူးပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန် Yes ပဲပြောပါတဲ့။ Ack ကိစ္စကိုတော့ Ofcourse ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ထောက်ခံနိုင်ပါတယ်တဲ့၊ နဲနဲ ဖန်စီဆန်ချင်ရင်တော့ Yeah အစား I See လို့ပြောလို့ရပါတယ်တဲ့။ Yeah ဆိုတာကိုတော့ နဲနဲ လမ်းသရဲဆန်ပါတယ်လို့ သူကသင်ပြပေးဖူးပါတယ်။
နဲနဲဝင်ပြီး သဘောထား ကွဲလွဲကြည့်တာပါ။ ဟီးဟီး။
အဖိုးတန်တဲ့ ထောက်ပြမှုလေး တစ်ခုပါ MrDBA ...
သဘောထား ကွဲလွဲတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ အမြင်တွေ အတွေ့အကြုံလေးတွေ စုစည်းခြင်း အားဖြင့် မကြုံရသေးသူများ၊ ကြုံလာမဲ့သူများ အတွက် အဖိုးတန် အကြံဥာဏ်လေး တစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ် MrDBA ခင်ဗျား
Comment အတွက် ကျေးဇူးပါ...
I agree with Ko DBA. "Yeah" and "Yup" arealittle informal. "I see" is definitely better. Sometimes "OK" can be used. (I think OK is no longer considered informal nowadays.)
Like Myanmar, Japanese also use "Hai" (yes), when they want to acknolwedge they are listening to the other party. Sometimes, westerners misinterpret this as that the listener agrees with what he/she is talking.
maung maung said...
ကျွန်တော်လည်းတခါကြုံဖူးတယ်... philipino မန်နေဂျာတယောက်က သူပြောတိုင်း yes , yes ချည်းမလုပ်နဲ့ ။ မင်းပြောတဲ့ yes က အဓိပ္ပာယ် အများကြီးသက်ရောက်နေတယ်ဆိုပြီးပြောသွားခဲ့တယ်။
;) i like this post brother
market chief andagood component to folks will leave out your magnificent writing due to this problem.
Takealook at my web site; mails-world.com
An fascinating discussion is price comment. I feel that it's best to write extra on this topic, it may not beataboo topic however generally
Feel free to surf to my web-site; http://springraise.bear-code.com/node/233118
my site; http://trustednewsnetwork.com/
I just could not depart your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a
Also visit my web page - HTTP://Hooknhound.com
good work! You know, lots of people are looking around for this info, you
Here is my website ... www.publicservicebroadcasting.org
Feel free to surf to my web site ... creativus.lv
my site :: Blackshout.com
just forawhile. I nevertheless haveaproblem with your leaps
one might do well to fill in all those gaps. In the
event you can accomplish that, I will definitely end up
My homepage :: http://W1.lv
my website ... level304media.com
hear isabunch of whining about something that you might fix if you werent too busy on the lookout for attention.
My homepage: agryd.com